Kardemir Heyeti Filyos ve Eren Limanlarında İncelemelerde Bulundu – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir67 ZonguldakKardemir Xog-baaris lagu baaray Filyos iyo Eren Ports
Kardemir Xog-baaris lagu baaray Filyos iyo Eren Ports
14 / 12 / 2018 67 Zonguldak, 78 Karabuk, Gobolka Central Anatolia, GUUD, Gobolka Banaadir, TURKEY
wafdiga kartemir waxay heleen kormeerayaal ku yaala dekadaha foosha iyo kuwa loo yaqaan 'eren'
Karabük Iron iyo Iron works (KARDEMİR) AŞ. Guddoomiyaha guddiga Agaasimayaasha Kamil Güleç, xubin ka mid ah guddiga H. Çağrı Güleç, kuxigeenka maareeyaha guud Mansur Yeke iyo maareeyaha iibka Harun Cebeci, wafdiga, ee ka shaqeeya magaalada Muslu ee Zonguldak Eren Energy Port iyo Mashruuca Portyo Filsos ayaa hada socda. laga helay imtixaannada.
Weftiga Kardemir ayaa gaadhay magaalada Muslu ee Zonguldak maanta si ay u eegaan hawlgalada ka socda Eren Port isla markaana ay la yeeshaan shirar isdaba joog ah oo ay la yeelanayaan maareeyaha hay, ada koowaad Eren Holding Gudoomiyaha Ahmet Eren, gudoomiye kuxigeenka Ziya Eren, gudoomiyaha tamarta Eren Emre Eren iyo xubin guddiga iyo Kuxigeenka Maareeyaha Guud Sencer Aras. Intii uu socday kulanka, wada shaqeynta Kardemir iyo Eren Holding iyo howlaha dekedaha ayaa laga wada hadlay.
Wefdiga Kardemir, oo sidoo kale baaray howlaha ka socda dekedaha Eren, ayaa u gudbay Filyos Town waxayna indha indheyn ku sameeyeen mashruuca Portyo Filyos, kaas oo dhismihiisu socdo, waxayna ka heleen macluumaad kusaabsan mashruuca Eren Göçük, kormeeraha goobta.
awoodda 25 million ton la 3 ugu weyn ee Turkiga. Saldhigga Mashruuca Filyos Port, ee loo qorsheeyay deked ahaan, waxaa dhigay Raiisul Wasaaraha waqtiga, Binali Yıldırım, bishii Diseembar 9.
Guddoomiyaha KARDEMİR Kamil Güleç wuxuu sameeyay bayaankan soo socda ee la xiriira booqashooyinka.
Maanta waxaan sameynay labo booqasho oo muhiim ah anigoo ku hadlaya magaca Kardemir. Marka hore, waxaan la kulannay Eren Holding iyo Eren Enerji Guddoomiyaha Guddiga Agaasimayaasha iyo Xubnaha Guddiga Agaasimayaasha si aan uga wada hadalno iskaashiga hadda jira iyo mustaqbal ee ka dhexeeya shirkadahayada. Waxaan sidoo kale fursad u helnay inaan baarno howlaha shirkadaheena ee dekada Eren isla goobtaas. Anigoo ku hadlaya magaca Ahmet Eren, waxaan jeclaan laheyn inaan uga mahadcelino dhamaan Xubnaha Guddiga sida soo dhoweyntooda ah. Kadib, waxaan tagnay Filyos waxaanan ku aragnay howlihii mashruuca Filyos Port Port, kaas oo wali dhismihiisu socdo, oo aan ka helnay macluumaad saaxiibkayaga Suuqa. Sida la ogsoon yahay, dekedani waxay muhiim u tahay shirkadeena. Annagoo ah Kardemir, waxaan higsaneynaa inaan sare u qaadno awooddeenna ilaa 2019 Milyan oo tan iyadoo la adeegsanayo maal-gelinta birta ee loo yaqaan 'Iron Mill' oo lagu dhammeyn doono 3,5.
Soosaarahan waxaan u baahanahay deked aan ku hanan karno ku dhawaad ​​8 Milyan oo tan oo alaabta ceeriin ah iyo agab dhameystiran. Tani waa mashruuc u furi doona Kardemir suuqyada adduunka. Dekadda Filyos waxay muhiimad weyn u leedahay kaliya maahan Kardemir laakiin waa gobolka oo dhan. Dekadani waxay sidoo kale noqon doontaa albaabka dhammaan Badda Madoow ee adduunka. Waxay fududayn doontaa culayska dekedaha iyo marinnada Marmara waxayna fududayn doonaan wadada iyo saadka tareenka ee Marmara. Dhanka kale, waxay awood u siineysaa ganacsiga shisheeye ee asal ahaan ka soo jeeda Bartamaha Aasiya iyo Badda Madoow inay gaaraan Koonfurta iyo Bariga Dhexe iyada oo loo sii marayo shabakadeena tareenka. 3 wuxuu ka dhigi doonaa gobolkeenna ganacsi muhiim ah iyo xarun warshadeed iyo saldhig macquul ah wuxuuna dalkeenna ku dhex yeelan doonaa bartamaha qaaradda hal talaabo oo ku dhow hoggaanka gobolka ee maraakiibta badda. Sababtaas darteed, waxaan ku faraxsanahay dhameystirka deg degga ah waxaanan si dhow ula soconaa maalgashiga. ”
Maanta taariikhda: 22 Oktoobar 1927 dhismaha wuxuu ka bilowday line Filyos-Irmak ee Filyos.
Maanta taariikhda: 22 Oktoobar 1927 Khadka Filyos-Irmak wuxuu bilaabmaa dhismaha Filyos
Maanta taariikhda: 22 Oktoobar 1927 Filyos-Irmak line at Filyos ...
Kardemir waxay rabtaa inay dhisato oo ay maamusho mashruuca dekedda
Wakiilka Ganacsiga ee Austria ayaa booqdey Kardemir
Ergada Waxbarshada ee KBU waxay xariir muhiim ah la leedahay Shiinaha
Guddoomiyaha Gobolka Awdal, TCDD Cankiri Warshad Faransiis ah oo laga helay baadhitaan
Guddoomiye Ku-xigeenka, Walxaha Baaskiil-tirka ah ee La helay Intii lagu baarey
Wasiir kuxigeenka Baarlamaanka Soomaaliya
Mashruuca dekedda Filyos
Karabuk Birta iyo Biraha Shaqada
Shilalka ka yimaad Shilalka Tareen ee Ankara